DG Puntland ayaa soo saartay digiin ku saabsan roobab mahiigaan ah oo dabeylo wata oo ku… – Hagaag.com
DG Puntland ayaa soo saartay digiin ku saabsan roobab mahiigaan ah oo dabeylo wata oo ku…
Wasaarada deegaanka, beeraha iyo isbedalka cimilada ee dowlad goboleedka Puntland ayaa oo saartay digniin, waxaana digniinta lagu sheegay in roobab mahiigaan ah oo wata dabeylo xooggan ay kusoo wajahan yihiin deegaanno badan oo kamid ah maamulkaas.
Dadka kunool Gobollada Bari, Nugaal, Sool iyo Sanaag ayaa waxaa si gaar ah loo amray iney ka fogaadaan dhulka biya qabadka leh iyo deegaannada biyo mareenka ah , si looga baaqsado in khasaaro xooggan ay sababaan daadad suura-gal noqon kara iney roobabkaasi ka dhashaan.
“Roobab mahiigaan ah ayaa la saadaalinayaa inay kusoo wajahan yihiin degaannada puntland, qeybo kamid ah gobolada Bari, Nugaal ,Sool iyo Sanaag ayaa la rajeynayaa inay heli doonaan roob xoogan oo sababi kara daadad ” ayaa lagu yiri warka digniinta ah ee Puntland ay sii deysay.
Digniintaan ayaa soo baxaysa. Xilli saacadihii lasoo dhaafay lasoo sheegayo in roobab ay ka da’ayeen deegaanno badan oo ku yaalla Gobollada Sool iyo Sanaag.